Gudniinka Fircowniga oo aan la Helin Cid Geysata - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gudniinka Fircowniga oo aan la Helin Cid Geysata
Publicerat tisdag 17 maj 2011 kl 17.27
War-bixin laga soo saaray jaamicadda Uppsala ayaa lagu qeexay in muddadii 30-ka sannadood ku dhoweyd oo dalkan laga mamnuucay gudniinka hablaha ee fircowniga gacanta lagu dhigay oo keliya sagaal ruux ee falkaa lagula kacay.
Iswiidhen ayey ku dhaqan yihiin hablo tiradooda lagu qiyaasey 20 000 da’dooduna ka hooseeyso 18 jir ee ka soo jeeda waddammada gudniinka fircowniga habluhu ka caadiga yihiin sida Soomaaliya iyo Eriteriya. Iyadoona wixii ka dambeeyay sannadkii 1982 oo la dambiyeeyay gudniinka fircowniga ee hablaha la helay 48 tuhun ee dembigaa la xiriira sagaal ka mid ah la caddeeyey laba ruuxna xabsi lagu xukumey.
- Waxaan hubaa iney jiraan qaar aan la ogsooneeyn, weligoodna la ogsoonaan doonin, sida uu sheegay Elis Envall, ahna baare ka howl-gala hayadda hoggaanka bulshada ee Socialstyrelse.
Ma jiraan falal caddeeynaya in gudniinka fircowniga ee hablaha lagu sameeyo Iswiidhen gudaheeda, hase yeeshee waxay halistu sii kordheeysaa marka fasax loo aado xilliga fasaxyada kuleeylaha iskuulaadka waddammada ey caadooyinkaasi ku adag yihiin.